ई-निर्यात - प्रोपार्सको साथ अब ई-निर्यात सुरु गर्नुहोस्!
पनि सामेल हुनुहोस्!
एक दिन 48 मिलियन इकाइहरू बेच्ने युरोपको सबैभन्दा ठूला बजारहरूको आफ्नो हिस्सा पाउनुहोस्।
टर्की को मात्र र संसारको अग्रणी ई-निर्यात समाधान
क्लिक गर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्, फरक हेर्नुहोस्।
एक ई वाणिज्य साइट संग ई निर्यात
टर्की मा खोलिएको ई-वाणिज्य साइटहरु को 96% पहिलो बर्ष मा बन्द छन्।
जब तपाइँ कम प्रभाव ई-वाणिज्य प्याकेजहरु संग ई-निर्यात शुरू गर्नुहुन्छ, तपाइँ सबै प्रक्रियाहरु मा एक्लै हुनुहुनेछ।
Propars बिक्रेताहरु को वार्षिक ई वाणिज्य बिक्री 300%द्वारा बढ्दै छन्।
Propars संग ई निर्यात
ती सबै जो Propars संग ई-निर्यात शुरू पहिलो बर्ष मा दुनिया लाई बेचे। Ars४% जसले प्रोपर्सको नि: शुल्क आधारभूत परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन् उनीहरुले पहिलो ३ महिनामा ई export निर्यात शुरू गरे।
प्रयोगकर्ताहरु को बिक्री जो3वा अधिक बजार मा बेच्ने 156%द्वारा वृद्धि।
1500+ व्यवसाय को छनौट Propars हो।
"तपाईले आफ्नो ई-कमर्स साइट वा ईआरपी लेखा कार्यक्रम Propars मा जडान गर्न सक्नुहुन्छ र ई-निर्यात सुविधा थप्न सक्नुहुन्छ। यो बेच्नको रूपमा व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण छ"
Propars संग तीन चरण मा ई निर्यात सुरु गर्नुहोस्
Propars तपाइँ प्लेटफर्महरु मा तपाइँ बेच्न चाहानुहुन्छ नि: शुल्क को लागी यसको स्टोर खोल्छ।
यो तपाइँ अनुबंधित कार्गो कम्पनीहरु बाट विशेष छुट मूल्यहरु प्राप्त गर्न र सजिलो ढुवानी गर्न अनुमति दिन्छ।
बिक्री शुरू गर्नुहोस्
उत्पादनहरु तपाइँ Propars मा अपलोड गरीएको देशहरु मा तपाइँ बेच्नु हुन्छ।
Propars को साथ, Amazon, Ebay, Allegro, Wish र Etsy जस्ता विश्वव्यापी बजारहरूमा एक क्लिकमा बिक्री सुरु गर्नुहोस्!
एकल स्क्रिनमा तपाइँका सबै अर्डरहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, एक क्लिकको साथ इनभ्वाइस! तपाईले बजार र तपाईको आफ्नै ई-कमर्स साइटबाट अर्डरहरूको लागि बल्कमा ई-इनभ्वाइसहरू जारी गर्न सक्नुहुन्छ र बल्क कार्गो फारम छाप्न सक्नुहुन्छ।
ग्राहकहरु को निजी ई-वाणिज्य साइटहरु को सट्टा बजार बाट खरीदारी
शीर्ष १० कारणहरु
बजार ग्राहकहरुई वाणिज्य साइट ग्राहकहरु
नि: शुल्क ढुवानी विकल्प
व्यावहारिक र सजिलो किनमेल
फराकिलो उत्पादन दायरा
वाणिज्यको शास्त्रीय बुझाइले अब ई-कमर्समा आफ्नो ठाउँ छोडेको छ। यद्यपि, ई-कमर्सले तपाईंलाई आफ्नो देशका सबै शहरहरूमा पुग्न सक्षम बनाउँदैन। एकै समयमा, देशहरूले महाद्वीपहरू पार गर्ने मौका प्रदान गर्छन्। ई-निर्यातको साथ, तपाइँ तपाइँका उत्पादनहरू तपाइँका सम्भावित ग्राहकहरूलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ।
विश्वव्यापी बजारहरू अब एक विशाल र भर्चुअल किनमेल केन्द्र हो जहाँ विश्वभरका सबै ग्राहकहरू भेट्छन्। यी प्लेटफर्महरूमा स्टोर खोल्नु भनेको सम्पूर्ण विश्वले भ्रमण गर्ने व्यवसाय हुनु हो।
यद्यपि ई-निर्यात धेरै लोकप्रिय भएको छ, विशेष गरी हालैका वर्षहरूमा विदेशी मुद्रा गतिविधि संग, व्यवसायहरु यस सम्बन्धमा केहि आरक्षणहरु छन्।
सबैभन्दा पहिले, हाम्रा SMEs, जससँग पर्याप्त जानकारी छैन, उनीहरूले यी लेनदेनहरूसँग सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच्छन्। अर्कोतर्फ, ठूला उद्यमहरूलाई सही कदम चाल्न कठिनाइ छ।
यद्यपि, सफ्टवेयर समर्थन, सरकारी प्रोत्साहन, भुक्तानी सेवा, रसद सेवाहरू अत्यधिक विकसित छन्। अब, जुनसुकै मापन वा व्यापारको उत्पादन, ई-निर्यात छिट्टै र सजिलै सुरु गर्न सकिन्छ।
Propars टर्की मा ग्लोबल प्लेटफर्म को समाधान साझेदार हो। हाम्रो उन्नत सफ्टवेयर र व्यावसायिक टोलीको साथ, हामी हाम्रा धेरै व्यवसायहरू ई-निर्यातमा ल्याउँछौं।
ई-निर्यात संग मुद्रा दर संग कमाई
टर्की लिराले हालैका वर्षहरूमा अस्थिर चार्ट पछ्याएको छ र दुर्भाग्यवश महत्त्वपूर्ण मूल्यह्रास अनुभव गरेको छ। यद्यपि, यस अवस्थालाई फाइदामा बदल्ने तरिका छ।
तपाईंको उत्पादनहरू विनिमय दरहरू मूल्याङ्कन गरेर बेच्दा तपाईंका उत्पादनहरूलाई TL मा मूल्य प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले टर्कीमा TL मा उत्पादन गर्नुभएका उत्पादनहरू विदेशमा USD, यूरो र स्टर्लिङ जस्ता मुद्राहरूमा व्यापार गरिन्छ। यस तरिकाले, तपाईले ई-निर्यातको साथ आफ्नो नाफा बढाउनुहुन्छ। यसबाहेक; यो ई-निर्यात को फाइदाहरु मध्ये एक मात्र हो।
माइक्रो निर्यातको दायरा भित्रको तपाईंको ढुवानीहरू टर्कीमा करबाट मुक्त छन्। यसबाहेक; यदि तपाईंले यो उत्पादन खरिद गर्दा कुनै पनि VAT तिर्नु भयो भने, यसले तपाईंलाई यो रकम फिर्ता पाउन पनि अनुमति दिनेछ।
तपाईंको व्यापारलाई धेरै च्यानलहरूमा विनिमय दरहरूसँग विभाजित गर्नाले तपाईंको व्यवसायको लागि सुरक्षित राजस्व मोडेल प्रदान गर्दछ। र यसले तपाईंलाई घरेलु बजारमा हुने उतार चढावबाट जोगाउँछ।
इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगसँगै विश्व विश्वव्यापी बनिसकेको छ र एक अर्थमा संकुचित भएको छ। दुरीहरू अब त्यति टाढा छैनन्। टर्की मा एक व्यापार सजिलै संग अर्को महाद्वीप मा आफ्नो सम्भावित ग्राहकहरु लाई आफ्नो उत्पादन परिचय गर्न सक्छ र एक अर्डर प्राप्त भएमा छिट्टै डेलिभर गर्न सक्छ।
तपाईले आफ्नो शहर वा देशमा तपाईले उत्पादन गरेको उत्पादन कति जनालाई बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर सोच्न आवश्यक छैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो; संसारमा कति जनालाई तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ।
किन सिमानाहरू पार नगर्ने जब तपाईं सारा संसारमा पुग्न सक्नुहुन्छ?